Nguruve ganda mupumburu - doro chinwiwa, nhanho-nhanho recipe
Nguruve ganda mupumburu - doro chinwiwa
Makanda enguruve anoonekwa seanonaka kwazvo, uye iwo anonyanya kunakidza muchimiro chemuriwo roll. Uyezve, roll yenguruve ganda rinokosheswa mukambani yevarume negirazi redoro.
Doro roll zvigadzirwa:
Imwe hanyanisi hombe;
Bay shizha 3 pcs .;
Garlic, mavhavha maviri;
500 g yeganda renguruve;
4 nhema mhiripiri;
1 bhero mhiripiri;
mhiripiri uye munyu kuravira.
Kugadzirira zvekumwa doro
Nhanho yekutanga yeresipi ndeyekucheka makarotsi akasvuurwa kuita madenderedzwa, uye wotema hanyanisi muhafu mhete. Bvisa dzinde nembeu dzese mubhero mhiripiri woita zvidimbu zvidete zvacho nebanga.
Yese iri pamusoro miriwo yakagadzirirwa yakagadzirirwa kukangwa nemafuta mupani, nepo isu tisingakanganwe kuwedzera munyu uye mhiripiri. Dhonza mafuta akasara mushure mekutsvaira.
Nhanho yechitatu yekubheka kwehombodo yedoro - paradzira ganda renguruve patafura uye cheka mafuta ese asina kufanira kubva pairi, riisiye rinenge masendimita nehafu. Iye zvino tinotora ganda renguruve uye tinoisa iyo yekuzadza yemiriwo mairi. Ipapo tinopeta ganda neyakaomeswa roll ndokuisunga neshinda munzvimbo dzinoverengeka.
Tinoisa pani nemvura ine munyu pamoto. Isa nhema mhiripiri, gariki uye bay shizha ipapo. Isu tinoisa mupumburu mumvura uye nekukurumidza kana mvura ikavira zvakare, kudzima moto uye kubika kwemaawa akati wandei.
Bvisa tambo dzese kubva kune yakapera yenguruve mupumburu uye cheka muzvikamu, izvo isu zvatinozoisa zvakanaka padhishi.
Heino yakapusa yakapusa, asi inonaka kwazvo nzira yenguruve yeganda bheriya tudyo! Bika, ndapota varume vako nevanodiwa!
Kubheka inonaka nyama yenguruve nzeve kune doro
Beer Shrimp: Snack Recipes
Onion inochekera fries - yakanyanya bhata doro!
3 sosi yemachipisi kana nyama
Akasarudza squid Recipe
Posted in Zvokudya zveSvondo neSaladhi
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,350 masekondi.